Ukuqondisa ngqo ku-Wood Printer EPSON China Manufacturer
Incazelo:Ukuqondisa ngqo ku-Wood Printer for Sale,Ukuqondisa ngqo kubashayela bephrinta bezinkuni,Iqondisa ngqo kumshayela wephrinta wezinkuni
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-UV > Iphrinta yezinkuni > Ukuqondisa ngqo ku-Wood Printer EPSON
Ukuqondisa ngqo ku-Wood Printer EPSON yimishini yokunyathelisa ethandwa kakhulu namuhla. Uma kuqhathaniswa nenqubo yokudweba enemibala ehlanzekile, isithombe somkhiqizo wokusiza asikona nje siqinile futhi sihle kakhulu, kodwa futhi sinjengokuphila nokuphefumula, futhi umuzwa ohlukile wokukhululeka olethwe yi-teknologi yokusiza iyamangalisa. Ukuqala kwemidwebo embossing kuhlanganisa inqubo eyingqayizivele yokudweba imidwebo ngenqubo yokudweba eyingqayizivele. Umshini wezinkuni umshini wokunyathelisa umbala we-UV ungaphrinta ngokuqondile izithombe ezihlukahlukene zombala noma logo kwizinto ezihlukahlukene. Umshini wokunyathelisa we-UV usuqede umkhawulo wezinto zokwakha, futhi ungaphrinta amaphethini kunoma iyiphi into ehleliwe, njengensimbi, izinkuni, i-ceramic, ingilazi, i-acrylic, indwangu nesikhumba, i-silica gel, i-personalized silicone isongo, igobolondo le-Apple, ikhava yefoni njalo njalo. Umshini wokushisa umshini wokunyathelisa umbala we-UV ubizwa nangokuthi iphrinta ye-Wood iphrinta ye- UV plate njalonjalo. Kuzo zonke izinsiza zendiza zingashicilelwa ngokuqondile, ngokuqondile ngaphandle komkhiqizo ophelile. Yiqiniso, ngenxa yobuchwepheshe obuningi nokunyathelisa, ezinye izinto ezidingekayo kufanele ziboshwe ngaphambi kokunyathelisa, ikakhulukazi ukwandisa ukunamathela kwamaphethini. Vumela imikhiqizo ephrintiwe igqoke ukumelana, ukukhwabanisa njalonjalo.
Izici eziwusizo ze- Direct Direct to Wood Printer Ukuthengiswa kwe-RF-A3UV:
2. Ukuqondisa ngqo ku-Wood Wood Printer Drivers ingafakwa nge-Height Detecting sensor, ukuvikela ikhanda lokuphrinta;
3. Ukuqondisa ku-Wood Woodter Drivers Ink cartridge ineNenzwa yokuThola iNgeli, uma inkinobho iqedile kuyobe ivusa;
Ukuqondisa ngqo kumshayeli wephrinta wezinkuni ngokucophelela: I-CISS ngaphandle kwenkinobho ye-ink + okushicilelwe kokushicilela + umphumela omuhle + wokusebenzisa umsebenzisi
Amageyimu aqondile kuya ku-Wood Printer Xhumana Nanje
Ukuqondisa ngqo ku-Wood Printer for Sale Ukuqondisa ngqo kubashayela bephrinta bezinkuni Iqondisa ngqo kumshayela wephrinta wezinkuni Ukuqondisa ngqo ku-Garment Printers for Sale Ukuqondisa ngqo kwi-Wood Printer Ink Ukuqondisa ku-Wood Printer Ukuqondisa ku-Shoes Printer Ukuqondisa ku-Printer Bank Bank